I Ulrich Zwingli
I Ulrich Zwingli na Huldrych Zwingli dia teolojiana soisa sady mpitarika ny Reformasiona protestanta tany Soisa, teraka tao Wildhaus tamin'ny 1 Janoary 1484 ary maty tamin'ny 11 Oktobra 1531 tao Kappel am Albis. Niasa amin'ny maha pretra katollika azy izy tao amin'ny paroasy maro, ka isan'izany i Glaeis sy i Einsiedeln izay niadiany tamin'ny fivavahana amin'i Maria (mariolatria), talohan'ny hieritreretany fa ilaina ny hanaovana fanitsiana (na fanavaozana na reformasiona) faobe ny Fiangonana. Tamin'ny taona 1523 izy dia nametraka ny fanavaozam-pivavahana tao amin'ny tanànan'i Zurich.
Ny mampiavaka ny teolojian'i Zwingli dia ny fitsikerany ny fototra anorenana ny sakramenta: aminy ny batisa dia famantarana ary ny eokaristia dia fahatsiarovana, fa tsy misy fanatrehan'i Kristy. Rehefa tsy nahomby intelo ny konferansa nataony handresen-dahatra ny mpitondra katolika mba hanitsy ny Fiangonana katolika iray manontolo dia nesorina daholo ny sary masina rehetra tao amin'ny fiangonan'i Zurich araka ny fanapahan'ny mpanapaka ny tanàna tao Zurich. Nanao izay hanjakan'ny reformasiona eran'i Soisa i Zwingli sy ny mpomba azy, eny fa hatramin'ny fampiasana ny tafika miaramila aza nanoloana ny fanoheran'ireo tanàna tsy niala amin'ny maha katolika azy sakaizan'i Aotrisy, ka izany no nahafaty azy rehefa resy an'ady tao Kappel ny tafika nisy azy.
Ny trano nahaterahan'i Zwingli ao Wildhaus.
I Zwingli no niandohan'ny fiforonan'ireo Fiangonana nohavaozina ao Soisa alemanika. Izy no filamatra ara-tantara eo amin'ny protestantisma liberaly.
1 Zotram-piainan'i Zwingli
1.1 Fotoana nandrantoan'i Zwingli fianarana
1.2 Ny fanavaozam-pivavahana
1.3 Fiafaran'i Zwingli
2 Ny teolojian'i Zwingli
2.1 Ny fomba fivoasany ny Soratra Masina
2.2 Ny hoe sakramenta
2.3 Ny batisa
2.4 Ny eokaristia na fanasan'ny Tompo
Zotram-piainan'i Zwingli[hanova | hanova ny fango]
Fotoana nandrantoan'i Zwingli fianarana[hanova | hanova ny fango]
Nandritra ny fianarany i Zwingli dia nandray fatratra ny toe-tsaina nanjaka tamin'ny andron'ny Fifohazana ara-tsaina (Renaissance), dia ilay atao hoe homanisma. Natao ordinasiona ho pretra izy tamin'ny taona 1505 ka notendrena hiasa ao amin'ny tananànan'i Glaris. Indroa i Zwingli no nampivavaka ny miaramila tany an'ady tao amin'ny tafik'i Glaris, izay nahitana mpikaraman'ady tamin'ny tafika eoropeana. Izany no nahatonga an'i Zwingli hiampanga ampahibemaso ny asan'ny mpikaraman'ady, ka tsy tian'ny lohandohany teo amin'ny tanàna izany. Tamin'ny taona 1516 dia nanaiky ny hiasa any Einsiedeln any atsimon'i Zurich izy.
Nandritra ny fotoam-piasany tao Einsiedeln dia nanomboka nahatsapa fangirifiriana vokatry ny fanaon'ny Fiangonana katolika i Zwingli. Tamin'ny taona 1516 dia namaky ny dikan-tenin'ny Testamenta Vaovao amin'ny teny latina nataon'i Erasmus von Rotterdam (frantsay: Erasme) izy dia nadikany tao amin'ny boky kely fanoratany izany ka nataony tsianjery. Nanambara i Zwingli raha nitory teny fa ny fampianarana sy ny fanaon'ny Eglizy dia miala lavitra ny kristianisma voalohany izay niankina tamin'ny Soratra Masina, notohanany tamin'ny lahatsoratra voadikany sy tamin'ny andalana nalainy tao amin'ny Baiboly izany. Isan'ireo fomba notsikerain'i Zwingli ireo ny fitsaohana ny olo-masina sy ny sisan-javatra navelan'ny olo-masina (relika), ny fampnantenana fanasitranana mahagaga ary ny fanararaotam-pahefana nataon'ny mpitondra fivavahana tamin'ny fampiasana ny indolzansy. Nahatonga azy halaza izany fianteherana amin'ny fahefan'ny Soratra Masina izany, ka tamin'ny 1 Janoary 1519 izy dia notendrena ho pretra tao amin'ny Katedralin'i Zurich izy.
Ny fanavaozam-pivavahana[hanova | hanova ny fango]
Sarivongan'i Zwingli ao Zurich: ny tanany iray mitazona Baiboly ary ny iray mitazona sabatra.
Ivontoeran'ny fisainana homanista i Zurich sady nampanjaka ny fanao izay mametra ny fahefan'ny Fiangonana ivelan'ny Fiangonana. Nanao famelabelarana, amin'ny teny azon'ny olona fa tsy amin'ny tany latina, ireo lahatsoratry ny Baiboly amin'ny teny fototra, dia ny teny hebreo sy ny teny grika, i Zwingli tao amin'ny Katedralin'i Zurich , ka noraisiny isan-toko sa isam-boky izany, ka ny Filazantara araka an'i Matio no nanombohany izany. Izany fandikana am-bava ny lahatsoratra fototryny Baiboly izay dia tsy fanaon'ny Fiangonana, satria ny pretra dia manoratra ny toriteny hataony avy amin'ny fivoasana ny dikan-tennin'ny Baiboly amin'ny teny latina, dia ny Volgata izany, sy amin'ny fivoasana ny soratr'ireo Rain'ny Fiangonana. Nanomboka tamin'ny taona 1519 dia efa nnisy ny nanonta printy ny hevi-baovaon'i Zwingli izay niparitaka hatrany ivalenan'i Zurich.
Tamin'ny taona 1519 ihany i Zwingli dia namaky voalohany ny soratr'i Martin Lotera. Nankahery azy ny fomba hentitra nitsikeran'i Lotera ny fisian'ny ambaratonga masina tao amin'ny fiangonana alemàna ka nandresy lahatra ny filankevitry ny tanàna i Zwingli tamin'ny taona 1520 mba hanafoana ireo fanerena ara-pivavahana tsy araka ny Soratra Masina. Isan'izany fanerena ireo ny fandrarana nataon'ny Fiangonana ny tsy fahazoa-mihinan-kena amin'ny fotoan'ny karemy. Tamin'ny taona 1522 dia maro ireo mpianatr'i Zwingli no nosamborina satria nandika an-tsitra-po izany fitsipika izany. Niaro azy ireo mafy i Zwingli ka nafahana izy ireo nefa nisy ny fanasaziana am-panoharana natao ho onitr'izany.
Natsahatry ny papa Adriano VI tsy hitory teny i Zwingli noho izany fiheverany izany, ka nangataka tamin'ny filankevitry ny tanànan'i Zurich ny mba hanameloka azy ho mpanao fampianaran-diso ny papa. Tamin'ny taona 1523 dia nasehon'i Zwingli teo anatrehan'ny filankevitra ny fiarovan-tenany. Nambarany tao ny fahambonian'ny Soratra Masina mihoatra ny tenim-pinoana (dogma) ampianarin'ny Fiangonana, notsikerainy ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny sary masina sy amin'ny sisan-javatra navelan'ny maty (relika) ary amin'ny olo-masina. Nasiany teny mafy koa ny sakramentan'ny eokaristia sy ny fitovoan'ny pretra. Tamin'ny fiafaran'ny fitsarana dia naneho ny fiombonan-keviny tamin'i Zwingli ny filankevitry ny tanàna ka nanaisotra ny tanaàna tao amin'ny fiadidian'ny evekan'i Consance ny tanànan'i Zurich sy ny manodidina. Nanambara koa ny filankevitra fa ny fandrarana an'i Zwingli tsy hitory teny dia tsy misy fototra avy amin'ny Soratra Masina. Ireo fanapahan-kevitra ireo dia naneho ny fisafidian'ny filankevitry ny tanàna ny reformasiona. Tamin'ny taona 1524 i Zwingli dia nanambady an'i Anna Reinhard.
Niova ho teokrasia i Zurich ka i Zwingli sy fiadidian-draharaha kristiana no mpitarika izany. Nisy ireo fepetra hentitra dia hentitra izay noraisina: fanovana ny monastera ho toeram-pitsaboana, fanafoanana ireo sary masina sy ny lamesa ary ny fanambaràm-pahotana (konfesy). Nanambara i Zwingli fa ny Kristiana marina dia tsy mila papa na Fiangonana akory.
Fiafaran'i Zwingli[hanova | hanova ny fango]
Ny namonoana an'i Zwingli, sary nataon'i Karl Jauslin (1842–1904).
Tamin'ny taona 1529 dia nivadika ho ady an-trano ny fifandrafiana nisy teo amin'ny tanàna tsy mitovy finoana. Tamin'ny 10 Oktobra 1531 dia nisahana fitaizam-panahy sy mpitondra fanevan'ny tafika soisa protestanta i Zwingli, ka naratra tamin'ny ady nifanaovana tao Kappel, avy eo novonoin'ny miaramila nandresy izy ny ampitson'io. Taorian'ny nahafatesany dia nitsahatra ny fielezan'ny Fanavaozam-pivavahana tany Soisa, ka ny ampahany amin'ny mponina dia Protestanta fa ny ampahany Katolika.
Ny teolojian'i Zwingli[hanova | hanova ny fango]
Ny teolojian'i Zwingli dia atao hoe zoinglianisma koa.
Ny fomba fivoasany ny Soratra Masina[hanova | hanova ny fango]
Araka ny hevitr'i Zwingli, ny vatofehizoron'ny teolojia dia ny Baiboly. Maka hevitra amin'ny Soratra Masina i Zwingli rehefa nanoratra boky. Apetrany ambonin'ny loharano hafa rehetra, toa ny konsily ekiomenika sy ny Rain'ny Fiangonana, ny Soratra Masina, na dia tsy misalasala aza izy amin'ny fampiasana loharano hafa hanohanany ny heviny. Ny ainga fototra mitari-dalana ny fivoasana ataon'i Zwingli dia avy amin'ny fanabeazana azony tamin'ny rasionalisma sy ny homanisma sy tamin'ny fahazoana ny tian'ny Baiboly ho lazaina araka ny fomban'ny fanavaozam-pivavahana. Laviny ny fanaovana fivoasana ara-bakiteny ny andalana ao amin'ny Soratra Masina, tsy sahala amin'ny an'ny Anabatista, mampiasa fivoasana am-panoharana izy ka fomba fiasa nohazavainy ao amin'ny A Friendly Exegesis (1527) izany. Misy fifandraisana am-panoharana na ara-tandindona ohatra eo amin'ny batisa sy ny famorana ary eo amin'ny eokaristia sy ny paska jiosy. Nifantohany koa ny lahatsoratra manodidina (konteksta) sady niezaka nanakatra ny tanjona kendrena ao ambadik'izany izy, ka manao fampitaha andalan-tSoratra Masina.
Ny hoe sakramenta[hanova | hanova ny fango]
Lavin'i Zwingli ny teny hoe sakramenta araka ny fampiasan'ny vahoaka io teny io tamin'izany fotoana izany. Ho an'ny olon-tsotra dia midika karazana asa masina izay iraiketan'ny hery manafaka ny feon'ny fieritreretana amin'ny fahotana io teny io. Amin'i Zwingli dia karazana fianianana na fampanantenana ny sakramenta, ka asehony fa io teny io dia avy amin'ny teny latina hoe sacramentum izay midika hoe "fianianana" (Io teny io no nahazoana ny teny frantsay hoe serment).
Tamin'ny asa soratr'i Zwingli momba ny batisa (na batemy) dia nilaza izy fa karazany iray amin'izany fampanantenana na fianianana (sacramentum) izany ny batisa. Nihaika ny Katolika izy tamin'ny fiampangany azy ireo ho mpinompino foana raha mihevitra izy ireo fa misy hery manasa fahotana ny rano anatanterahana ny batemy. Taty aoriana, raha tsy nifanara-kevitra tamin'ny Anabatista izy, dia niaro ny fanaovam-batisan-jaza, ka nilaza fa tsy misy lalàna mandrara ny fanaovana izany. Nanazava izy fa ny batisa dia famantarana ny fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra, ka misolo ny famorana ao amin'ny Testamenta Taloha.
Ny eokaristia na fanasan'ny Tompo[hanova | hanova ny fango]
I Zwingli sy i Lotera
Mitovitovy amin'ny fiheverany batisa ny fiheverany ny eokaristia. Nandritra ny ady hevitra ifanatrehana (latina: diputatio) nifanaovany tao Zurich tamin'ny taona 1523 dia notsipahiny ny fisian'ny sorona tokoa mandritra ny sorona masina (lamesa), ka nanazava izy fa i Kristy dia natao sorona tokana indray mandeha monja ho an'ny fotoana rehetra. Ny eokaristia dia "fahatsiarovana ny sorona". Araka izany heviny izany no nampandrosoany ny fomba fijeriny, ka nanaovany tsoa-kevitra ny amin'ny fanaovana fivoasana ara-pamantarana ireo teny anorenana ny fanasan'ny Tompo. Maro ireo andalana ao amin'ny Soratra Masina raisin'i Zwingli hanoherana ny "fiovan-draha" (transsobstansiasiona) sahala amin'ny nataon'i Lotera koa, ka ny andalana ampiasainy amin'izany dia ao amin'ny Filazantsara araka an'i Jaona (Jao. 6.63). Ny fomba fijerin'i Zwingli sy ny fivoasany ny Soratra Masina amin'ny fanakarany ny hevitry ny eokaristia dia antony iray tsy nampisy fifanarahana teo aminy sy i Lotera.
Ao amin'i Freebase:  Archived Oktobra 3, 2014 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulrich_Zwingli&oldid=1013872"
Teraka tamin'ny taona 1484
Maty tamin'ny taona 1531
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 04:27 ity pejy ity.